Ethiopian Ni Diigamtii⁉️
Jechaa fi Abjuu Qamaacaa!
“Itoophiyaan Ni Diigamti!”
Namoonni tokko tokko akka waan itophiyaan hossee bososaan ijaaramteetti “Itoophiyaan diigamte “jedhu . Itoophiyaan Kan ijaaramte hosseedhaan osoo hin taane lafeedhaani.Dhiiga abboota keenyaatu Itoophiyaa itiche!
Warri Abjuu qacaacaa afarsitan nu dhiisaa! Ilaalcha siyaasaatiin hangam gargar taanuus itoophiyaa diiguufis ta’ee Sarbamuu itoophiyaarratti gammachuun lafa dhiituun yarummaadha! Tokko tokkommoo “Ani itoophiyaa miti” jedha! Kunis seenaa uummata oromoo waan qabatamaan beeku miti.
Kaateen hortee kuush eessa akka ta’e ,eessaa akka ka’ee eessatti akka dhaabbatu waan hinbeekneef of gane! Oromoon Kan itoophiyaa hintaane Eenyu Itoophiyaan! Abbootni oromoo biyya kana ijaaruu keessatti, Gaheen isaan qaban laagaan seenaa iyyee ragaa ba’a ! Ashaaraan abboota keenyaa itoophiyaa biyya godhee dhaabuu keessatti iddoo ol Aanaa qaba.
Of ganuun yarummaadha. Kaayyoon keenya Oromoofi Oromiyaa itoophiyaa qabattee gaanfa afrikaa irratti olkaatu arguudha malee , itoophiyummaa ofirraa mulqinee, ilaalcha gadi bu’aa keessa gototamuu miti! Oromoon Itoophiyaan ala , Itoophiyaan Oromoon ala dhaabbatee jiraatu hinjiru! Sodoon xaxamaa jiru garuu ifaadha.
Humni Itoophiyaan diiga jedhu kamuu ofii hunkutaa’a malee Itoophiyaan kabaa irraa hinijaaramne ! Abjuun qacaacaa kun abbuma fakkaatti. Hololli gamaa gamanaa afarfamu kun gola hinaaftotaatii Kan ciinca’udha.
warra fedhii aangoof halkaniif guyyaa mar’atu, warra dantaa dhuunfaaf malee mirga sabaa hin ilaalle! warra ana yoo ta’e malee biyyi kun biyya hin taatu jedhan , warra lagaan qabsaa’uu malee haqaaf qabsaa’uu hin beekne, warra qumaara jal’inaatiin keessisaanii uke! warra uumaafi uummataaf hin abboomamne, Bara baraan siyaasa gadadoo fi boo’icha gurraachan Saba qaqan! Isaan akkasiitu biyyi diigamteettii , Orimomiyaan Mootummaa hin qabdu jedha. Sammuun isaanii duumessa shiraatiin dukkaneeffameera.
Oromoon uukkaamsaa hamaa irratti raawwatamaa ture Shira sirna mootota Abbaa Irree jalaa obbaafateera.Amma Mootummaa ofii isaan filateen bulaa jira. Hooggansa ilma Abbaa gadaatu itoophiyaa bulchaa jira. Takka Ekeraa boollaatti lubbuu godhanii ittiin uummata burjajessuuf yaaluun mo’amuudha. Sadarkaa uummatni Oromoofi itoophiyaa irra gahe hin beekne. Uummanni Abbaa isaaf ta’u tolchee bareera. Si’aachi Paartii kamis haa ta’u , qaamni kamuu uummata kana goyyomseen galaan Gowwummaa Isa dhoqqaa’uuti.
Uummata itoophiyaa waliin uumaatu jira! Humni keessaaf alaan biyya kana diiguuf waixirfatu kamuu ,lammuu akka ol hinkaaneetti ni awwaalama! Kun haqa bor mul’atudha. Irreen hamootaa itoophiyaa hindanda’u. qoromsii fi waraanni hangamii ta’us mul’ataa fi Humna itoophiyaa uukkaamsuuf haamilee hinqabu.
Gudeelchi yeroof nu danqes falaxamee , daaraa ta’uunsaa hin hafu! Baala waraanteen maasii keenya weeraartes walitti dachaafamtee Isa dhumaaf murtoo argatti! Loye galaan nukeessa harka naqaxes gingilfamee toora isaaf Malu qabata! lootee galtuun Wucii wayyaanee fi buchullaan tplf seecca’amanii ni harca’u.
Gulaalliin kana booda geggeeffamu Isa dhumaati! Haafaaf kosora waliin hindeemamu! Saxaxni garee warra diigumsa biyyaa abjootanis ni gubata.
Yeroon Uummatni itoophiyaa “uffee” jedhee boqotu dhiyaateera. Garlameefi gardhabeen ni buqqaati. Kara deemtuuf gadi deemtuun murtee uummata Itoophiyaan ni harcaati!Si’aachi uummanni itoophiyaa boonaa jiraata malee booyaa hinjiraatu! Arrabni siyaasa shiraa arraabu laagaatti oldachaafama. Abjuun gadi galoo qaalaa maseenaakeessatti ukkaamama. Dhiichisni garee dharaa onaadha.
Haloo ! Dhaga’a ! Yaa warra abjuun qacaacaa fi qamaacaa! Itoophiyaan Biyya guddoodha. xiqqoo akka keessaniin hin yaramtu! Itoophiyaan Biyya dhiiga fi lafee abboota keenyaan ijaaramtedha. siyaasa corroqa safaratiin , mul’ata dhoqqee isin laaqamtaniin hin xurooftu!
Alabaan itoophiyaa Bantii addunyaatti ol ni kaafama! Hattuuf gantuutti biyya hin gurgurru! laagaan jal’ootaa moofaa salphinaatiin ni cuqqaalama! Itoophiyaan uummata ishee waliin sodaatamaa, kabajamaa, doonii badhaadhinaa yaabbatteen gaalaana hiyyummaa ni qaxxaamurti! Dhalootaaf missiraachoo gaariitu jira !
Diigumsa lallabuurra ijaaruudhaaf osoo waltumsinee, Wal nyaachuurra osoo waliif nyaannee, waldiinomsuurra osoo araaraaf Wal hawwannee, uumaanis uumatnis Gammachuu qaba. Itoophiyaan akka risaa olkaatee qorumsa ishee mudate gararratti mul’atashee olkaaftee , diinotashee faanashee jalaatti ilaalaa samii badhaadhinaa keessa imalti!
Itoophiyaan Hin Diigamtu!
Posted byabdiaminbakar 15th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Ethiopian Ni Diigamtii⁉️
Gorsa Hayyuu!! Seenaa Addaa
“Namticha tokkootu “yaa Rabbii hayyummaa naaf kenni” je’ee waaqa isaa kadhate ja’an.
Yeroo namtichi hayyummaa naaf kenni je’ee kadhatu, Rabbin immoo rakkoolee danuu furmaata namtichaa barbaadan walduraa duubaan isa mude, ja’ama.
Namtichiniis, yeroo rakkooleen adda addaa isa weerrartu, “yaa Rabbi ani hayyummaa akka naaf kennituun si kadhe malee, akka rakkoolee adda addaatiin na burjaajessituun si kadhadhee?” jechuun waaqa isaa gaafate.. Rabbiis, “hayyummaan bilisaan kennamtu hin jirtu.
Hayyummaan kan argamtu rakkoolee adda addaa furuudhaani” jechuun deebii deebiseef ja’an.
MM. Dr. Abiy Ahmed Ali hayyummaa akka qabaatu Rabbumaatu fedheen.
Ergaa aangoorra bahee irraa eegalee, rakkoolee biyya keessaatiifi ala danuu tokkootu walduraa duubaan isa mudachaa jira.
Rakkoolee kanneen, hanga addunyaan Noobilii nageenyaa badhaasuudhaan ragaa baatuufitti, aarsaa baayyee gadi aanaa tahe kafaluudhaan walduraa duubaan gahumsaan furaa as gaheera.
Rakkoolee fuuldura mudattuus haala dinqisiisaa ta’een akka furu walnama hin gaafachiisu.
Meetiin “ibiddaan qorama” ja’anii mii ree!!
MM Dr. Abiyyi gaggeessaa seenaa itiyoophiyaa keessatti yeroo duraatiif hayyummaa isaa hojii qabatamaadhaan mirkaneesseedha.
viva!! Abbichuu. Hanga dhumaatti siin waliin jirra!!!
Posted byabdiaminbakar 14th Oct 2021 14th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Gorsa Hayyuu!! Seenaa Addaa
Muudama Kab/Aadde Fariyaa Aliyyi Itti antuu Kantiiba Magaalaa Duukam tahudhan Muudan! Jabduu Hoggansa
Hawaasni Magaalaa Duukam Baga Gammaddan
Hoggansa tajaajjiila hawaasaaf of kennee, haqummaa fi amanamummaadhaan hojjachuu isheef hawaasa biraa kabajaan kan kennamuuf akkasumaas Ummatafi Mootummaa waal hubachiisidhan, Haqa Ummanni Mootummaa irra qabuufi Dirqama Ummanni Mootumma isaani irra qaban amanamummaadhan, Ummata Isheetif Halkanif guyya osoo hin jenne kutannoodhaan hojjachuudhan kan beekkamtu.
Rakkoo Ummata ishee Sodaa takka malee ofitti amanamummaadhan kan hojjacha turtee.
Kab/ Aadde Fariyaa Aliyii Itti antui Kantiibaa Magaalaa Duukam tahun muudamanii jiru. Jirattoonni Magaalaa Duukam hoggansa akkasii argachuu keessaniif baga gammaddan jenneerra
Bara Hojii Milkii Aadde Fariyaa Aliyyii
Posted byabdiaminbakar 13th Oct 2021 13th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Muudama Kab/Aadde Fariyaa Aliyyi Itti antuu Kantiiba Magaalaa Duukam tahudhan Muudan! Jabduu Hoggansa
Wan qabsooyneef beekuu qabna,
Bakka irraa kaane beeku qabna
Bakka itti deemnu beeku qabna,
Galmi keenya Essa akka tahe beeku qabna
Kayyoo fi mulata keenya beeku qabna.
Namni bakka irra kaane hin beeyne bakka itti deemnu hin beeku,
Nuti saba of dandahe qabsawa ture malee saba of dadhabe Alagaatti hirkatu miti,wanti alagaatti nu irkaachiisu hin jiru,
Nuti saba ballaa of tahee tokkummaan fakeenya biyyaaf tahu male saba bicuu of diiguu miti,
Arra irra dhaabbanne hegeree boruutiis fakkeenyuumma gaarii dhaalchiisu qabna.
Oromoon kaleessa biiyya ijaaruuf qabsawa ture ,arraas biiyya ijaaruuf hojjachaa jiirra,kaleessas wan waliin dhabne qabnaaf qabsawaa turre malee wan irraatti wal dhabne hin qabnu,arraas akkuuma kaleessatti biyya ijaaruuf waliin qabsawu qabna malee wal sakallee ormaaf daboo tahuun saba guddaa kana xiqqeessuu hin qabna.
Kaleessas sabni ballaan kun maliif biyya hin gaggeesiineef qabsawaa turre male abalu masara haa seenuu jeenne miti,
Wan of harka qabnu yoo of harkaatti wallaalle wanti sii harka bahee nuuf hin deebi’u akkuma Eegee fi sheenaan gara boodati jedhamu sanaatti erga of harka baafne sheenawuu osoo hin taane osuuma nu harka jirtu jabafachu qabna.
Ormi nu jalate nuuf yaadeeti miti kan daboo sii olfaatu ,bu’aa Angoo kan beeku daboo sii olfaateeti karaa qaxxamuraan bakka bareetti debi’uuf siitti fayyadama jira atii hoo walalteeti moo maliifi???
Biyyoonni guddaatanis tan biyya teenya ergachaa turte wan tateef biyyii saba guddaa kanaan akka gaggeefamtu of taate jiraattu hin barbadaan ,mee yoo seenaa dabarsiine kan yaadaannu tahe ,biyyoonni dur qamadii nu deggaaraa turaan maliif yoo kan nuuf yaadan tahee qamadii nu gargaru osoo hin taane meshaa qoonnaa,xaa’oo,meshaa jalliisi fi kkf akka omiishnee of dandanyuu maliif meshaale akkasi maliif nu hin gargariin ? Eggaatumma qofa nu barsiisuun akka jilba cabsanne eggaatuumman isaan eggaannu nu godhuun akka kara barbadanitti isaan jalatti gad jeennee jiraannu qofa barbadu, biyyoota Afrika akka of taatee of dandeesse guddaattu hin barbadaan ,bara nuti of taanee jiraachu jalqabneetti duulli wanti cimuuf akka isaaniif sagannuufi,garu ammaan booda qamadiif jeecha birmadduummaa keenya dabarsiine hin keenniinu,kan ethiopiyaa jalatu dandii ethiopiyaan egalte irraatti gargaruudha.
Posted byabdiaminbakar 12th Oct 2021 13th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Furmannii kanuma
Posted byabdiaminbakar 9th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Badhafamtoota NOBEELI
Baguman arge hundaa
Gochaa firaa fi alagaa
Ammas umurii qabaannaan
Fuuldurratti baay’een arga…!
Isa fayyaa sukkuumee
Cabsee taasiisu naafa
Isa qajeelaa dabsee
Jaldhisee fakkeessu fafa..
Isa jiraa awwaalee
Du’aa fayyisuuf yaalu
Abbaan safuu dagatee
Kan ilma isaa dhaalu
Meeqan argee taajjebe
Garuu argees hin obsu
Nan dubbadha na dhimma.
Gaafan hubadhee laalu
Jedheetin of gaafadha
“Nama jechuun maaluma”..?
Posted byabdiaminbakar 7th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Ati Kheyruma Yaadi, Sharriin Abbaa Egdii, Umriin Dhertun waa heddu nama barsiftii, namas garsifti
Baxaraanummaan dhaloota moo madaqqii dha laata?
Baxaraanni gaafa harma haadhaa hodhu osoo hodhuu ciniina. Gaafa dugda haadhaa yaabbatu haadharraa guftaa buusa.
Haadhaatu sattare ta’a malee tan gaafa garaa haadhaa keessa turee faan tan quduraati. Gaafa tiksu ameeysa nama hin dhiinne aannan isaa dhugeeti eegee isaa qabatee itti shorroqaa babbaasa!
Posted byabdiaminbakar 5th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Baalagummaa (Baxaranummaa)
Ni Dhufta ree!! Anis Si qeebalu Qophiidha OK
Ni Dhuftaaree Laata?
Abdii goge jiistee
Gorsaan na utubdee
Hamii orma itti dhiistee
Hamaa ofkeessaa gubdee
Jaalala hin moofofneen
Dhiigakoo naan jettee
Ofitti na waamtee
Oolmaan waliif oolle
Nu diiguuf garmaamu
Anaan sitti hadheessee
Diina nu gowwoomsee
Siin natti hamatu
Lamaan keenya sobee
Boolla nutti qotu
Bartee haqa haqame
Seenaa keenya hatame
Kan nu cabse gufuun
Wal hubachuu keenyaan
An dheebochaan jira
Posted byabdiaminbakar 4th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Ni Dhufta ree!! Anis Si qeebalu Qophiidha OK
Sababa sarvarri dhaabbata Facebook har’a rakkoo godhatee dhaabbateef jecha amma tana gatiin gurgurtaa sheerii facebook %5.5 gadi bu’uun maallaqa guddaa dhabbaticha kasaarsee jira. Waggaa keessatti kasaaraa guddaa dhaabbaticha mudate jedhamaa jira. Yoo dafanii sirreessuu baatan daran gatiin sheerii gadi bu’uun kisaaraa caalu geessuu danda’a.
Kisaaraan hanga ammaatti saa’aa 3f cufamuu Facebook, WhatsApp fi Instagram qofti dhaabbata Facebook irratti geessisu doolaaraa Ameerikaa Milyoona $500’tti tilmaama. Messenger fi Oculus VR yeroo irratti dabalamu kisaaraan isaa ni dabala jedhameet tilmaama. Odeeffannoon xiqqoo hin qabduuf isiniif maxxanse
@youtube Abdi Amin Bakar
Abdi Amin Bakar/አብዲ አሚን በከር عبد امين بكر
Nu Qunnamuu yoonif barbbaddan Linki arman gadii kan caqasttani Nu qunnamuu dandeessuu
Posted byabdiaminbakar 4th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Odeessalee haara
Posted byabdiaminbakar 4th Oct 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Odeeffanno haaraa